Vaovao - Masinina mpamolavola koba / lafarinina ho an'ny milina fitotoam-bary
Ny drafitra FSFG dia ampiharina betsaka amin'ny zavamaniry fikosoham-bary maoderina sy ny fikosoham-bary. Nampiasaina indrindra ho an'ny varimbazaha nototoina sy ny fanivanana fitaovana afovoany, azo ampiasaina amin'ny fanasivanana ny lafarinina ihany koa. Ny famolavolana sieving isan-karazany dia natao ho an'ny sifting samihafa sy fitaovana afovoany samihafa.
- Andian-tsarimihetsika FSFG Plansifter dia entin'ny motera iray izay napetraka ao anatin'ny fefy lehibe ary mifandanja amin'ny counterweight. Ny milina tsirairay dia misy sivana 4, 6, na 8 ao anatiny. Ireo fitaovana samihafa dia mivoaka mankamin'ny faritra samihafa amin'ny lalany manokana. Araka ny volavolain'olon-tokana ho an'ny fitaovana samihafa, ny sivana dia manasivana akora granular samy hafa amin'ny andalana isan-karazany ao amin'ny fararano rehefa mandeha ny milina iray manontolo.
- Hasiana fefy: 640x640mm, 740mmx740mm, na vita arakaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa.
- Rafitra lovia vy voahidy. Rindrina anaty boaty omena vy tsy misy fangarony. Counterweight azo ovaina nitaingina tamin'ny SKF (Swedenn) bearings roller andalana roa manokana ary karazana fampifanarahana tena.
- Sameve sivana dia vita amin'ny hazo nafarana nopetahany takelaka anatiny sy ivelany miaraka amin'ny lamination melamine plastika, demountable, azo takalo. Ny fefy sivana dia misy fantsom-by vy. Ny fizarana tsirairay dia mihidy amin'ny alàlan'ny vatan-by sy visy mikrometrika tsindry avy eo ambony. Mora sy haingana ny manova ny sivana fanasivanana.
- Fivoahana ho famoahana planifter, ao anatin'izany ny satroka plastika mainty ao anatin'ny haban'ny gravitasi.
- Sivana ireo fitaovana mba ho SEFAR harato.
- Misy sivana style Nova vao zahana ihany koa, sieve anatiny aluminium ho an'ny fitakiana fanadiovana bebe kokoa.
Sivana plansifter ampiasaina amin'ny zavamaniry fanodinana varimbazaha
- Ampiasaina betsaka amin'ny fikosoham-bary maoderina, zavamaniry fanodinana voamadinika ary fikosoham-bary.
- Ampiasaina indrindra ho an'ny varimbazaha namboarina sy ny fanivanana fitaovana afovoany, azo ampiasaina amin'ny fanasivanana ny lafarinina.
- Ny famolavolana sieving isan-karazany dia natao ho an'ny sifting samihafa sy fitaovana afovoany samihafa.